कृति समीक्षा ‘गजलको धुन’मा बहकिँदा – Chitwan Post
पूर्णबहादुर साउद विसं २०४४ वैशाख १० गते पिता रामबहादुर साउद तथा माता अमृतादेवी साउदका कोखबाट हिच्मा १, अछाममा जन्मेका हुन् । सरल, मिजासिलो, सहृदयी तथा कम बोल्ने प्रवृत्तिका साउद सरकारी सेवामा आबद्ध छन् । उनीसँग पंक्तिकारको विगत पाँच–सात वर्षदेखि मित्रता कायम छ ।
उनले विद्यालय पढ्दै गर्दा भएको जिल्लास्तरीय कविता प्रतियोगितामा द्वितीय–२०६०, आफू कार्यरत संस्थाबाट नगद पुरस्कार–२०७० तथा कालिका एफएमले आयोजना गरेको गजल प्रतियोगिता–२०७२ मा दोस्रो स्थान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
गजलकै माध्यमबाट धादिङ निवासी मिसन मञ्जु आलेसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको कथा झनै रोचक छ । उनको पहिलो सन्तानका रुपमा छोरी कविता र अहिले छोराको जन्म भएको छ । उनकी अर्धांगिनी मञ्जु असल गृहिणी ममतामयी माता हुनुका साथ साथै श्री जाल्पादेवी प्राविको प्रधानाध्यापकको पदमा रहेर शिक्षाको ज्योति छरिरहेकी छिन् ।
सप्रेम–२०७० उनको पहिलो कृति गजलसंग्रह हो । नेपाली सेनामा कार्यरत उनी भरतपुरमा रहँदा पंक्तिकारसँग भेट भएको थियो । पछि उनले गजलसंग्रह निकाल्ने योजना रहेको बताइएको थियो । गजल सम्पादन, प्रकाशन, विमोचन तथा प्रचारप्रसारमा पंक्तिकारले गरेको सहयोगको उनले मुक्तकण्ठले प्रशंशा गर्ने गर्छन् । लाग्छ, यो उनको महानता हो ।
यहाँ पंक्तिकारले ‘गजलको धुन’ भित्र समेटिएका केही गजलका शेरहरुमाथि सामान्य टिप्पणीमात्रै गर्ने प्रयास गर्दैछ ।
गजल पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा धेरै लेखिने र पढिने विधा भएको छ । प्रकाशित, प्रकाशोन्मुख गजलसंग्रहहरुको संख्या हजारभन्दा धेरै छ । प्रकाशित सबै कृतिहरु राम्रा छन् म भन्दिनँ र राम्रा छैनन् पनि । अल्पसंख्यक राम्रा कृतिहरुमा पनि उत्कृष्ट गजलहरुको संख्या न्यून छ । ती गजलका शेरहरु पढ्दा, गाउँदा र सुन्दासमेत साँच्चीकै आनन्द लाग्छ ।
दुःखसुख, जीवन भोगाइका यावत् कुराहरु समेटेर गजल लेख्न शिरीष अग्रसर छन् । त्यस्ता गजलका शेरहरु पढेर उनी बहकिन खोज्छन् । ती शब्दहरुमा समेटिएका भाव, राग महसुस गर्न चाहन्छन् तर सक्दैनन् उनी । प्रस्तुत छ, उनको यो भोगाइलाई समेटिएको संग्रहको शीर्ष गजलका दुई शेरहरु :
रेट्दा आउँछ राग
मीठो सुखदुःख समेटी
बहकाउँछ मन तर
खोज्छु छुन सक्दिनँ ।
हाँसो आँसुको मिश्रण
प्राण उडे नि गजल
सम्झिदिनू सगुन ।
(गजल १ शेर : २ र ४)
पूर्ण प्रेयसीसँग बिताएका अतीतका स्वर्णिम पलहरुले सताउँदा छटपटिन्छन्, तड्पिन्छन् । यौवनको उन्मादले रित्तो बिस्तरामा प्रेयसीको सुगन्ध खोज्न थाल्छन् । उनको गुलाफी ओठको, रेशमी बालको, चमकदार जोडी नयनका, पुष्ट स्तन सबैसबै सम्झिएर मदिराले उन्मक्त मात्तिएझैँ र यौवनले आत्तिएझैँ बर्बराउँछन् :
कल्पना छ अनौठो
रित्तो बिस्तरा ।
(गजल ५ : शेर ५)
यो गजल विष्णु भट्टको संगीत र साज तथा सिग्देलको स्वरमा रेकर्ड भएको छ । यसको निर्दोष जीवनले सुन्दर भिडियोसमेत निर्माण गरेका छन् ।
अहिले समय, काल र परिस्थिति उस्तै रहेन । पाठकहरुभन्दा लेखकहरुको संख्या बढी भएको छ । टोलटोलमा साहित्यिक संस्थाहरु गठन भएका छन् । साहित्य पनि राजनीतिजस्तै विषाक्त बनिरहेको छ । राम्रा होइनन् हाम्रा स्रष्टा र कृतिहरु पुरस्कृत, अभिनन्दित हुने परिपाटी बन्दै गएको अवस्थामा साउद निकै दुःखित छन् :
पार्टीकै छहारी साहित्यकार
देख्दा सन्तसाधु भित्रभित्रै
हराम कमाउने ।
(गजल १७ ः शेर ५)
भर्खरमात्रै समाज परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनकै नाममा भएको गृहयुद्धमा सुन्दर, सुदृढ समाज निर्माण, धनी–गरिब, ठूला–साना, धर्म, वर्ण र लिङ्गबीचको विभेद हटाउन लागेका हजारौँ मारिए, कयौँ बेपत्ता छन् र घाइते छन् । तर देश जहाँको तहीँ छ, समाज जस्ताको तस्तै छ, धनी–गरिबबीचको खाडल झन्झन् बढ्दै छ, जातीयताको विभेद उस्तै छ । क्रान्ति गर्ने भन्दै देशलाई गृहयुद्धको चपेटामा पार्ने शीर्षस्थ नेताहरु स्वयम् विलासी जीवन र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
आखिर ती देखाएका सपनाहरु, ती क्रान्तिकारी भाषणहरु मात्र अफवाह थिए, झूट्टा थिए जुन युद्धमा पड्किएको बम, बारूद र गोलासँगै उडेर गएको कुरा गजलकारले निस्सङ्कोच व्यक्त गरेका छन् :
सिद्धान्त बोक्ने झोलासँगै
उडे लक्ष्य, सपना बम
बारूद गोलासँगै ।
भाइ भाइ लडाए
सर्वहारा भन्थे जो त्यही
मोज गर्दै रमाए
सुन चाँदी, तोलासँगै ।
(गजल २३ ः शेर १ र ५)
वर्तमान समयसम्म आउँदा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी करिब पचास लाख नेपालीहरु श्रम गर्नकै लागि विदेशी भूमिमा छन् । रहरले होइन बाध्यताले पसिना बगाउन विवश छन् उनीहरु । यीमध्ये कति साहूले बन्धकी राखेको खेत उकास्न, कति रोगी बाबुआमाको उपचार खर्च जुटाउन, कति छोराछोरीका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न, सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न, कतिपय अलिकति घडेरी लिएर सानो भए पनि आफ्नै घरमा बस्ने सपना साकार गर्न घरपरिवार, गाउँ, समाज, साथीहरु, छरछिमेक सबै छाडेर परदेश पुगेका हुन् ।
ती तमाम हृदयहरुको प्रतिनिधि आवाजलाई हृदयस्पर्शी शब्दहरुमार्फत यसरी उनेका छन् गजलकारले ः
बर्बराएँ परदेशमा ।
(गजल ६८ ः शेर ३)
शोषक, सामन्ती, भ्रष्ट र तानाशाही शासकहरु निर्दोष जनतामाथि जब अन्याय, अत्याचार गर्न तल्लीन हुन्छन् तब विद्रोहको एउटै आवाज निस्कन्छ । सम्पूर्ण पीडित जनताहरु एकजुट हुन्छन् । जहाँ क्रान्तिको बिगुल घन्किन्छ र सुरू हुन्छ आँधीसमान आन्दोलन जसले सदियौँदेखि जड भएर बसेको शासनसत्ता ढलाउँछ, जसरी ढले विसं २००७ मा १०४ वर्षे राणाशासन, विसं २०४७ मा ३० वर्षे पञ्चायती शासनव्यवस्था, विसं २०६२÷६३ पछि दुई सयभन्दा लामो शाहवंशीय राजतन्त्र ।
तर, अझै पनि केही व्यक्ति र संस्था जनतामाथि खेलबाड गर्न थाले र तानाशाही बन्न थाले भने भेलरुपी जनसागरले इतिहास दोहो¥याउने छ भनेर खबरदारी गर्दैछन् शिरीष ः
सह्यौँ धैर्यता भत्किए
बढार्ला मौन जनता
जब भेल हुनेछ ।
(गजल ९२ ः शेर ५)
‘गजलको धुन’ मा ९२ वटा गजलहरु समावेश छन् । पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानको ४९औँ प्रकाशनमालाको रुपमा रहेको संग्रहमा संस्थाका अध्यक्ष गोर्खे साइँलोको प्रकाशकीय लेख, साहित्यकार केशवराज आमोदीको भूमिका, डा. कृष्णहरि बराल, ज्ञानुवाकर पौडेल, डा. घनश्याम परिश्रमी, पुष्प अधिकारी अञ्जलि, शीतल कादम्बिनी र उनकै जीवनसंगिनी मिसन मञ्जु आलेको शुभकामना संकलित छन् !
शिरीष लयलाई पछ्याउँदै गजल गुनगुनाउन मन पराउछन्, उसरी नै गजल लेख्छन् पनि । अहिले उनको तेस्रो कृति ‘गजलको धुन’ पछि ‘काजल’ (बाल गजल ग्रन्थ) प्रकाशित भैसकेको छ । र, यतिखेर उनले उपन्यास प्रकाशनको तयारी गर्दैछन् । उनको साहित्यिक, पारिवारिक, व्यावसायिक एवम् सामाजिक भविष्यको शुभकामना अर्पिन्छु ।
नेपालकै लागि मर्दछु (कविता)